China Silenced Type Hydraulic Breaker LBS140 ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Shengda
Silenced Hyddị Hydraulic Breaker LBS140
Silenced Hyddị Hydraulic Breaker LBS100
Akụkụ Typedị Hydraulic Breaker LBS195
Akụkụ Typedị Hyddị Hydraulic Breaker LBS185
Akụkụ Hyddị Hyddị Hydraulic Breaker LBS135
Akụkụ Sidedị Hyddị Hydraulic Breaker1 LBS75
Top Type Hydraulic emebi LBS68
Silenced Hyddị Hydraulic Breaker LBS85
Akụkụ Typedị Hyddị Hydraulic Breaker LBS45
Teknụzụ mkpọtụ dị ala
Ọhụrụ imewe, mgbochi vibration nke efere
Uzo emechiri emechi, ezigbo nchebe maka isi aru
LBS mechiri emechi ụdị onye na-emebi ihe na-eji sistemụ mmanụ dị elu, na-egosi obere oriri mmanụ, ngbanwe dị mma na arụmọrụ dị elu. Ngwá ọrụ ahụ dum nwekwara atụmatụ dị elu d
Dị Mgbapu Hydraulic Silence (Boxdị Igbe)
• Teknụzụ mkpọtụ dị ala
• Kacha ọhụrụ na imewe, mgbochi vibration nke efere
• Ọdịdị mechiri emechi, ezigbo nchebe maka isi ahụ
LBS mechiri emechi ụdị onye na-emebi ihe na-eji sistemụ mmanụ dị elu, na-egosi obere oriri mmanụ, ngbanwe dị mma na arụmọrụ dị elu. Akụrụngwa ahụ dum gosipụtara atụmatụ dị elu, usoro dị mfe, ihe pere mpe, obere nsogbu na ịdị mfe nlekọta.
•Anyị na-ahọrọ ihe kacha mma: 40CrNiMo, 20CrMo, 42CrMo
• Na-eduga na teknụzụ ọgwụgwọ okpomọkụ. Anyị nwere ụlọ ọrụ nlekọta ọkụ nke anyị na ọgwụgwọ 10 afọ 'ọgwụgwọ okpomọkụ
• Anyị nwere injinia izizi nke mbụ, imirikiti ndị ọrụ anyị nwere ahụmihe karịa afọ 5
Ozi Nkọwa Companylọ Ọrụ
Akwụkwọ ISO & CE
Ngwa sitere na Japan na Korea
Ndị injinia na ndị ọrụ nwere ahụmahụ
Nnyocha siri ike iji hụ na ngwaahịa siri ike
Huaian Shengda Machinery e guzobere na 2009, anyị ụlọ ọrụ na-ekpuchi ebe ndị 30000. Anyị na-tumadi aku R & D, n'ichepụta na ahịa nke haịdrọlik emebi. Site na ahụmịhe anyị bara ụba na ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike ma na-arụsi ọrụ ike, anyị nwere ike izute ihe dị iche iche achọrọ site na ụdị ndị ahịa dị iche iche. Anyị debara aha anyị "LBS" aha anyị. Ngwaahịa LBS nwere uru nke mmezi dị ala, ndụ ọrụ ogologo, yana atụmatụ ọhụụ. N'ime afọ ole na ole gara aga, ụlọ ọrụ anyị na-aga n'ihu na-egosi ndị na-eweta ngwaahịa a pụrụ ịdabere na ya nke SANY, XCMG na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ ama ama.
Ebe Mmalite Jiangsu, China (Chile)
Aha Akara LBS
Nọmba nlereanya LBS 140
.Dị Igbe Typedị Hydraulic Breakers
Agba Yellow ma ọ bụ Ahịa Na-achọ
Ngwa Ngwuputa, Ugbo ala, na Owuwu
Ngwá ọrụ dayameta 140 mm
Pistin elu-edu alloy ígwè
NZC ISO9001: 2015
Nrụgide mmanụ ọrụ
Nchọpụta mmanụ chọrọ
1 / nkeji
Ngwá ọrụ dayameta
Mbukota：Otu ụdị n'ime akpa nchekwa nchekwa, wee banye igbe igbe poly-osisi. Ihe ngwugwu ọ bụla gụnyere ihe ndị na-esote: ngwongwo abụọ, eriri abụọ, otu setịpụrụ kalama N2 na nlele nrụgide, otu setịpụ akara akara, otu igbe ọrụ nwere ngwaọrụ mmezi dị mkpa yana akwụkwọ ntuziaka.
Q: you bụ onye nrụpụta?
A: Ee, anyị factory e guzobere na 2009.
Ajụjụ: Ì ji n’aka n ’ngwaahịa gị ọ ga-adaba ihe nyocha m?
A: Ngwa anyị dị mma maka ọtụtụ ndị na-egwupụta akụ. Gosi anyị ụdị excavator gị, anyị ga-akwado azịza ya.
Q: Nwere ike ị na-emepụta dị ka ndị ahịa 'imewe?
A: Chọpụta, OEM / ODM ọrụ dị. Anyị bụ ndị ọkachamara emeputa.
Q: Kedu maka oge nnyefe?
A: 5-25 ọrụ ụbọchị mgbe ugwo.
Q: Kedu maka ngwugwu?
A: Anyị equipments ọbọp site gbatia film, juru n'ọnụ site pallet ma ọ bụ polywood ikpe; ma ọ bụ dị ka achọrọ.
Nke gara aga: Silenced Hyddị Hydraulic Breaker LBS100
Osote: Top Type Hydraulic Breaker LBS100
Fine Hydraulic Rock emebi
Ndị na-emepụta Hydraulic Rock Breaker
Akụkụ Hydraulic Rock
Hydraulic Rock emebi Ahịa
Hydraulic Rock emebi mapụtara Parts